तपाईको ड्राइभिङ लाइसेन्स हरायो ? अब अर्को लिन के गर्ने ?
कहिलेकाहीं सवारी चालक अनुमति पत्र अर्थात ड्राइभिङ लाइसेन्स हराउन पनि सक्छ । यो अवस्थामा नयाँ लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ । नयाँ लाइसेन्स लिनका लागि आफूले लाइसेन्स लिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सम्पर्क राख्नु पर्छ । यसका लागि सवारी चालक अनुमति पत्...
कोबेल्कोका सञ्जिव कुमार भन्छन् : ग्राहकका लागि सम्पर्क नामक एक प्रोजेक्ट स्थापना गरेका छौ
सञ्जिव कुमार देव विगत सन् २००१ देखि नै हेभी इक्विपमेन्ट व्यवसायमा आवद्ध छन् । देव ७ वर्ष देखि लगातार कोबेल्को कन्स्ट्रक्सन इक्विपमेन्टको कारोबार गरिरहेका छन् । करियरको प्रारम्भिक १२ वर्ष पार्ट्स तथा सर्भिसिङ क्षेत्रमा क्रियाशील देव ८ वर्ष यता कोबेल्...
टिप्स : आफ्नो बाइकलाई यसरी सुरक्षित राखौ आफू जस्तै
सवारी साधनमा टु ह्विलर अर्थात बाइकलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले खतरनाक साधनको रुपमा लिइन्छ । त्यसैले बाइक चलाउँदा जहिले पनि सावधानीका साथ चलाउनु पर्छ । खाल्डो सडकमा बाइक चलाउँदा अझ धेरै ध्यान राख्नु पर्छ । तर चलाउन जानेमा र सावधानी अपनाएमा बाइक राइडिङबा...
नयाँ कार किन्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुस्
यदि नयाँ कार खरिद गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यी ५ कुरामा ध्यान दिनु होला । कार खरिद गर्नु पुर्व डिस्काउन्ट, कार एसेसरिज, शोरुम मूल्यको साथमा बजेटको पनि ध्यान दिनु पर्छ । डिस्काउन्टकार खरिद गर्नु भन्दा अघि कारको बारेमा पुरा जानकारी पहिले नै हुनु...
जाडोयाम शुरु भयो, यसरी राखौ टायरलाई सुरक्षित
जाडोयाममा कारको केही पार्टस्हरुमा विशेष ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । जाडोयाममा तापक्रम कम हुने भएकोले टायरमा प्रेशर कम हुन जान्छ । त्यसैले जाडो मौसममा विशेषगरी कारको टायरमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । वातावरणमा १० डिग्री गिरावट आउने वित्तिकै टायरमा एक पाउण...
लद्दाख जानका लागि किन रोयल इन्फिल्ड नै रोज्छन् राइडरहरु ?
बाइकरहरुका लागि भारतको मनोरम स्थान लद्दाख एक सपना हो । उनीहरु लामो दुरीको यात्रा पार गर्दै लद्दाख सम्म बाइकमै जान रुचाउछन् । तर बाइकमा पनि अन्य बाइक भन्दा धेरैले रोयल इन्फिल्डकै बाइक रुचाएको पाइन्छ । केही समय पहिले नेपाली राइडरहरु पनि त्यहाँ पुगेका...
इलेक्ट्रिक स्कुटर VS पेट्रोल स्कुटर : फाइदा के ? बेफाइदा के ?
हाल नेपाली बजारमा समेत विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर छन् । विश्व बजारमै इलेक्ट्रिक सवारी साधनको प्रयोग बढ्दै छ । तर इलेक्ट्रिक स्कुटरको लोकप्रियता अझै बढ्न सकेको छैन । यसमा भएका केही कमी कमजोरीलाई सुधार्ने हो भने भविष्य इलेक्ट्रिक स्कुटरको छ ।...
इलेक्ट्रिक बाइक या स्कुटर किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरामा ध्यान दिनुस्
पछिल्लो समयमा इलेक्ट्रिक बाइक र स्कुटरको प्रयोग बढ्दै छ । हालै बजाजले पुरानो ब्रान्ड चेतकलाई इलेक्ट्रिक भर्सनमा लन्च गरेको छ । नेपाली बजारमा समेत विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक टु ह्विलर रहेका छन् । इलेक्ट्रिक बाइक वा स्कुटर किन्दा केही कुरामा ध्यान द...
बीएस ६ के हो ? किन छ चर्चामा ?
बीएस ६ को पुरा नाम भारत स्ट्यान्डर्ड ६ हो । यो गाडीबाट निस्कने एमिशनलाई तय गर्ने मापन हो । यो युरोपमा चल्ने एमिशन नर्म्स युरो ६ को आधारमा बनाएको थियो । हाल भारतमा बीएस ४ नर्म्स चलिरहेको छ । यसको प्रयोगले गाडीबाट निस्कने प्रदूषण कम गर्दछ । तर यसको ला...
एड्भेन्चरको लागि शौखिन हुनुहुन्छ ? त्यसो भए कारमा यी ७ कुरा राख्न नबिर्सनुस्
एड्भेन्चर निकै रोमान्चक र खतरनाक पनि हुन्छ । यसको लागि केही सावधानीहरु अपनाउनु पर्ने हुन्छ । यसको लागि पहिले नै योजना बनाउनु पर्ने हुन्छ । जसले एड्भेन्चर रोमान्चक होस् । यदि तपाईहरु पनि खतरनाक एड्भेन्चरको लागि शौखिन हुनुहुन्छ भने आफ्नो साथमा केही सा...
इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ ? यी ५ कुरामा ध्यान दिनुस्
हाल अटोक्षेत्रमा इलेक्ट्रिक गाडीको निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । भारत लगायत नेपालमा पनि इलेक्ट्रिक गाडी तथा टु ह्वीलरको माग बढिरहेको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी इलेक्ट्रिक स्कुटरको प्रयोग बढी भइरहेको छ । इलेक्ट्रिक स्कुटर खरिद गर्नु भन्दा पहिले ५ वटा क...
तपाईंलाई कुन सेगमेन्टको बाइक उपयुक्त ? हेर्नु्स्
नेपालमा हरेक सेगमेन्टका बाइक बिक्रीका लागि उपलब्ध छन् । सामान्य इन्ट्री लेभलका सय सीसीदेखि लिएर हेभी र डर्ट बाइक सम्म नेपाली बजारमा उपलब्ध छन् । सबैका लागि सबै लेभलका बाइक उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको बाइक छनोट गर्नु आवश्यक हुन्छ...
टिप्स : धेरै माइलेज चाहनु हुन्छ ? नगर्नुस् यी ७ गल्ती
बाइकमा बढी माइलेजको लागि धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । राम्रो तरिकाले चलाउने हो भने बाइकको राम्रो माइलेज पाउन सकिन्छ । यसका लागि यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बाइक राइड गर्ने समयमा कहिल्यै पनि लगातार क्लच समाउनु हुँदैन । अधिकांश चालक ड्राइभ गर्द...
यसरी राख्नुस् साइड मिरर, गलत तरिकाले राख्दा दुर्घटना हुन सक्छ
कार ड्राइभ गर्दा सानो सानो गल्तीले पनि दुर्घटना हुन सक्छ । ड्राइभिङको समयमा कम स्पिड राख्ने, आफ्नो लेनमा मात्र ड्राइभ गर्ने, मद्यपान गरेर ड्राइभ नगर्ने आदि गर्दा राम्रो हुन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि कहिलेकाही साइड मिरर ठिकसँग सेट नहुँदा पनि दुर्घटना ह...
कति समय पश्चात वाइपर्स परिवर्तन गर्नु आवश्यक हुन्छ ?
खराब मौसम, धेरै तापक्रम वा धुलाम्य सडक भएको समयमा वाइपर्सको काम पनि धेरै हुन्छ । यो अवस्थामा वाइपर्स पनि छिट्टै नै खराब हुन्छ । पुरानो वा खराब वाइपर्सले विन्ड–स्क्रिन सफा नगर्ने मात्र होइन, नोक्सान समेत पु¥याउछ । समयमै वाइपर्स परिवर्तन गर्द...
पुरानो बाइक किन्दा यस्ता फाइदा, यस्ता बेफाइदा
बजेटको कमीले गर्दा केही मानिसहरु सेकेन्ड ह्यान्ड वा पुरानो वा रिकन्डिसन बाइक किन्न चाहन्छन् । यद्यपि पुरानो बाइक खरिद गर्दा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा बाइकको मर्मतमा धेरै पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ । तर राम्रो कन्डिशनको बाइक खरिद गर्दा भने २/३ वर्ष...
विज्ञको सुझाव : टायर प्रेसर के हो ? बढी वा कम भए के हुन्छ ? कसरी व्यवस्थित गर्ने ?
गाडीधनीले कमसेकम टायर प्रेसर, इन्जिन आयल, कुलेन्ट, एयर फिल्टर आदिको जाँच गर्न सक्नु पर्छ । टायर प्रेसर समय समयमा मेन्टेन गर्नु आवश्यक हुन्छ । प्रेसर कम हुँदा इन्धन खपत धेरै हुन्छ । त्यसैगरी टायर प्रेसर बढी हुँदा गाडीको सस्पेन्सन पार्ट्स त्यति राम्रो...
अनलाइनबाट कार बिक्री गर्दै हुनुहुन्छ ? यी सावधानी अपनाउनुस्
हिजाआज अनलाइनबाट कार खरिद बिक्री गर्नु सामान्य कुरा भएको छ । तर यो हेर्दा जति सजिलो देखिए पनि त्यति नै खतरनाक पनि रहेको छ । कार बिक्रीको लागि कारको फोटो र जानकारी अनलाइनमा राख्दा यसको दुरुपयोग पनि हुन सक्ने खतरा रहन्छ । अनलाइनमा रहेको कारको नम्बर प्...
यी ५ गल्ती नगरौ वर्षा याममा बाइक वा स्कुटर चलाउँदा
वर्षाको मौसममा ठाउँ ठाउँमा पानीले भरिएको हुन्छ । वर्षामा सबैभन्दा धेरै समस्या बाइक र स्कुटर ड्राइभ गर्नेलाई हुने गरेको छ । सडकमा जम्मा हुने पानीको कारण टु ह्वीलर ड्राइभ गर्दा चिप्लने डर रहेको हुन्छ । वर्षायाममा बाइक वा स्कुटर चलाउँदा केही कुरामा ध्या...
के हो इथानोल ? यस्तो छ इथानोलको फाइदा र बेफाइदा
हालै टीभीएसले पहिलो इथानोलबाट चल्ने बाइक अपाचे आरटिआर २०० एफआइ ई१०० लन्च गरेको छ । इथानोल एक प्रकारको इन्धन हो जसले प्रदूषण कम गर्नुका साथै यसले गाडी पनि चलाउन सकिन्छ । इथानोल एक प्रकारको अल्कोहल हो जसमा पेट्रोल मिलाएर गाडीमा इन्धनको रुपमा प्रयोग गर...
नक्कली हेलमेट टाउको र आँखाको लागि हानिकारक, कस्तो हेलमेट प्रयोग गर्ने ?
सुरक्षाको दृष्टिकोणले मोटरसाइकल चलाउँदो हेलमेटको प्रयोग गर्नु निकै आवश्यक छ । अधिकांश चालकले जरिवाना तिर्नु पर्ला कि भन्ने डरले जथाभावी हेलमेटको प्रयोग गरेका हुन्छन् । केही चालकले मात्र सुरक्षाको लागि भनेर राम्रो हेलमेटको प्रयोग गरेका हुन्छन् । अहिल...
कार पानीमा डुबेको छ भने यी तीन गल्ती कहिल्यै नगर्नुस्
बर्षा यामको समयमा दिनहुँ जसो भारी बर्षा भइरहन्छ । बर्षामा नेपालको अधिकांश सडकमा पानी जमेको हुन्छ । बर्षामको समयमा ड्राइभिङ गर्दा अतिरिक्त सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । बर्षाको समयमा जताततै पानी जमेका हुन सक्छ । त्यसैले पानी जमेको अवस्थामा ड्राइभिङ गर...
यस प्रकारको समस्या आएमा गाडीको टायर परिवर्तन गर्नुपर्छ
हरेक प्रकारको सवारी साधनमा टायरले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । गाडीको सम्पूर्ण भार टायरमा नै परेको हुन्छ । अधिकांश चालकहरुले टायरमा त्यति ध्यान दिएको पाइदैन । टायरमा खराबी आए पनि धेरै वर्षसम्म चलाएका समेत हुन्छन् । जसको कारण टायर पन्चर हुने वा टा...
वर्षात लाग्यो, यी ७ तरिकाले बचौ सडक दुर्घटनाबाट
अहिले मनसुन शुरु भइसकेको छ । वर्षातमा सडक दुर्घटना हुने सम्भावना बढी रहेको हुन्छ । सडकमा हिलो र पानी जम्मा हुने भएकोले टु ह्विलर अर्थात बाइक वा स्कुटर भएकाहरु बढी दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । कच्ची सडकको खाल्डोमा पानी जम्मा हुने र रातको समयमा नदेख...